Liesse iyo burburintii woqooyiga, qalalaasaha ka dhacay Koonfurta: sida Moroccansku ugu noolaayeen guushii Aljeeriya ee CAN 2019 - JeuneAfrique.com - WAA KU SAABSAN
ACCUEIL » COMPANY »Liisanka iyo kala-qaybsanaanta waqooyiga, qalalaasaha ka jira Koonfurta: sida Moroccansku ugu noolaayeen guushii Aljeeriya ee CAN 2019 - JeuneAfrique.com
Guusha Aljeeriya waxaa si weyn u dabaaldegay Morocco, taasoo abuurtay goob fagaare aan hore loo arag oo woqooyiga dalka ah. Si kastaba ha noqotee, rabshadaha ayaa ka qarxay Koonfurta.
La guushii Algeria ee CAN 2019 wuxuu ku soo maray qaab isbarbar dhig ah - waana mid aad u siyaasadeed - Morocco, halkaas oo fikradihii, waqtigii la soo dhaafay ee jahwareerka la dareemay ka dib ciribtirka dhicii hore ee Libaaxyadii Atlas, intiisa badan dib loo dhigay xiisihiisii ​​kow iyo tobanka Algeria.
Gobolka woqooyi bari ee Oriental, oo ay weheliyaan xadka la wadaago oo xirnaa ilaa sanadihii 25, muuqaalada farxadda leh ayaa xustay habeenki 19 Luulyo 20, oo ay ku jiraan Saidia- ama taageerayaasha Moroccan ee Fennecs ayaa ku rakibay " aagga fan - Isgoyska xadka ee Zouj Bghal iyo Oujda.
Magaalada dambe, kolonyada gawaarida oo muujinaya calamado isku dhafan Morocco iyo Calanka Algeria ayaa safray halbawlayaasha iyadoo dadweynihii isugu soo baxay Fagaaraha 9 July iyo hortiisa Qunsuliyada Guud ee Algeria.
Labada bangi ee Wadi Kiss, oo kala soocaya Saidia iyo magaalada Alrsaeri ee Marsa Ben M'Hidi, boqolaal taageerayaal ah ayaa ku heesay magaca caanka ah: " Mid, laba, saddex, Viva Algeria ". Laakiin sidoo kale: "Dadku waxay doonayaan dhamaadka xuduudaha".
Sida laga soo xigtay ilo boolis, dhacdooyinkan foosha-xumada ah ee lama-filaanka ah waxay isu keeneen lix illaa toddobo kun oo Moroccan ah oo ku yaal Oriental iyo dhowr kun oo dheeri ah oo boqortooyada ah (Casablanca, Tangier, Rabat, Marrakech ...).
Dadweynaha ayaa loo soo bandhigay '20 July', farriinta diirran ee hambalyada King Mohammed VI "walaalkii reer Aljeeriya, munaasabadan taariikhiga ah", waxaa si taxaddar leh loo cabiray si loo muujiyo in khilaafka u dhexeeya labada deris uusan ahayn mid ku saleysan cadaawad ka dhexeysa labada qoomiyadood, laakiin muran aan dabiici ahayn: ee Sahara.
Muuqaallada rabshadaha ee Laayoune
Gobollada koonfureed, dhinaca kale, habeenkii 19 ee Luulyo 20 waxaa lagu calaamadeeyay rabshado rabshado wata oo si dhammaystiran u khaldan kor ku xusan.
Iyada oo laga jawaabayo halku-dhiggii la soo saaray tan iyo markii Tindouf uu hoggaaminayo Jabhadda Polisario Front, shabakadaha xag-jiriinta gooni goosadku waxay hoos u dhigeen waddooyinka Laayoune, Smara, Dakhla, Boujdour iyo Tan Tan kooxaha dhallin-yarada ee lagu qiyaasey inay ku dhow yihiin 9 000, oo leh ujeedo gaar ah: in laga faa’iideysto faraxada ay sababtay guushii Aljeeriya si ay booliska uga hor tagto.
Bartamaha dhacdooyinka, magaalada Laayoune waxay la kulantay muuqaalo dhab ah oo rabshado ah oo u dhexeeya mudaaharaadyo ku hubaysnaa dhagaxyo iyo mindiyo iyo boolis, kuwaas oo adeegsaday gaaska dadka ka ilmaysiiya, rasaasta caagga ah iyo xitaa "dab". wicitaan aan khatar ahayn, laakiin leh rasaas nool, si looga baxo.
Marka loo eego ilaha amniga si ay taas u Dhallinyarada Afrika Mohammed VI Avenue waxaa deganaa dhowr saacadood in kabadan laba kiiloomitir, oo ay ka mid yihiin dab qabadsiyo gawaarida, jidgooyooyin, ceyrin laanta bangiga iyo weerarka gaari booliis ah, kahor intaysan dadweynuhu joogin kala firdhiyey. Xubno ka tirsan booliiska 169 iyo tiro aan la garaneyn oo rabshado wata ayaa la dhaawacay. Labaatan qof oo mudaaharaadayaal ah ayaa la qabtay.
Fespaco 2019: '' Invisibles '' waa la iloobay! - Abidjanshow.com
Ku soo noqo xididdada Lodia K.: Summada Bazara Pagne waxay u safri doontaa Togo - JeuneAfrique.com
Kongo-Brazzaville: Denis Sassou Nguesso, afhayeenka Afrikada Dhexe ee COP 25 - JeuneAfrique.com
Video dheeraad ah3,607